Verenga Semalt Tips Uye Usabvumira Bot Kuti Uchengete Computer Yako!
Jason Adler, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti kushungurudzwa kwebhoti ndiyo inonyanya kuoma uye yakakurumbira maitiro ekunyorwa kwepurogiramu mazuva ano. Vanobvumira vashandisi uye spammers kutora mazano emakombiyuta enyu uye vanovashandura mu zombi dzemakombiyuta pasina nguva. Zombie makombiyuta zvino vanoita mabasa akasiyana-siyana uye vanoita semabhodetsi ane simba ekuita mhando dzakasiyana dzemhosva dzemuInternet nekunyengera, kuparadzira zvirwere uye kuunza spam.
Chii chinonzi Bot?
Bhoti ndiyo rudzi rwemarware inobvumira vanotambudza kudzora uye kuvhara kombiyuta yako kana foni - vps hosting providers. Izvo zvinonziwo marobhoti ewebhu uye ichine chikamu chekubatanidza nemichina yakawanda yehutachiona. Iyi mambure yemichina ine utachiona inosvika kubva kumazana kusvika kune zviuru zvemakombiyuta kana zvigadzirwa zvemagetsi pasi rose. Sezvo bhoti inopinza makombiyuta uye zvigadzirwa zvemagetsi, unyanzvi hunogara uri shure kwezvirwere izvi zvose. Iro cycricriminals inopindira kupindira nemabasa ako epaIndaneti nekubira data yako. Vanowanzotumidzwa kuti vafudzi kana mabhota.
Mamwe emabhodekiti angave ane zvigadzirwa zvishoma zvinoshandiswa, asi imwe yacho inobva kune gumi kusvika kune zviuru zvemakombiyuta anenge aripo. Makombiyuta akasiyana-siyana anotapukirwa zuva rega rega, uye vashandisi havatauri chero kunetseka, izvo zvinoreva kuti havana pfungwa yekuziva kuti mhepo yavo yakachengeteka kana kwete.
Bhoti rimwechete kana boka rebhodhi (iro rinozivikanwa seti botnets) rinogona kuderedza kombiyuta yako kana chipangizo chechifambisi, kuratidzira zvakavanzika uye zvisingazivikanwe uye kuparadza mhepo yako pasina nguva.
Maitiro eBotnets Anoshanda sei?
Mabhoti anogona kukanda pakombiyuta yako nenzira dzakawandisa. Anowanzopararira paIndaneti ne injini dzekutsvaga . mishonga isina utachiona Botnets nemabhati zvinokurumidzira pakuwana huwandu hwemichina uye kurondedzera kuna masters kuti vakazadzisa vavariro yavo.Vanoda kuramba vakavanzwa mukati memakombiyuta yako kusvikira tenzi achivarayira kuita chimwe chinhu basa.
Kuchengetedzwa neBots uye Botnets:
Kuti uchengetedze zvishandiso zvako pamusoro pemabhenetsiti kana bots, unofanira kufungisisa mazano anotevera:
1. Isai-rated security software:
Zvakanaka kuisa chirongwa chekuchengeteka kana shanduro yakadai seNorton Internet Security kana Norton 360. Zvose izvi ndezvechokwadi uye dzakavimbika, uye nyanzvi dzakawanda dzeTIT dzinokurudzira matanho aya nekuda kwezvavanonyatsoziva uye maitiro.)
2. Gadzira zvirongwa zvekuvandudza:
Tinokurudzira kuti ugadzire zvirongwa zve software yako kuti uvandudze zviri nyore. Izvi zvichawedzera kukuchengetedza kwako uye zvichaita kuti zita rako rekushandisa nephasiwedi zvive zvakachengetwa makore mushure memakore.
3. Wedzera kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa mukati mutsvaga:
Ungave uchishandisa Firefox kana Google Chrome, unofanira kuwedzera mararamiro ako ezvigadziro mumushanduri uye usanamatira pane zvinyorwa zve email kusvikira waona kuti yakabva kupi. Dzimwe nguva, vashandisi vanyore pane zvinyungudyo zvinoshungurudza uye masangano avo anogadziriswa pasina nguva. Uyezve, haufaniri kumbomira mawebhusayithi evanhu vakuru uye unofanirwa kudzivisa kuzarura zvipikiso zvebhanner.